Xildhibaan fiqi oo ka hadley shirka lagu taageerayo farmaajo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xildhibaan fiqi oo ka hadley shirka lagu taageerayo farmaajo
Xildhibaan fiqi oo ka hadley shirka lagu taageerayo farmaajo
Dadka Muqdisho ee shirarka abaabulan qabanaya ee haddana waaqaca ay ku nool yihiin is-hilmaansiinaya “waa kuwa raba carrabkooda macaan in ay biyaha dhanaan ee badda ku macaaneeyaan”.!!
Waxaa la yaab leh siyaasiyiin magac weyn leh iyo dad bulshada qiima ku leh oo inta meel la isugu keenay ama isugu tagay aan soo hadal-qaadin siyaasadda la isku haayo ee doorashada la xiriirta ama muddo isku kordhinta muranku ka taagan yahay, kuwaasoo bulshada u Jeedinaya hal muxaadaro oo cinwaankeedu yahay “amniga Muqdisho”.
Amniga ay ka hadlayaan ma ahan mid loola jeedo alshabaab dadka gumaadaya in wax looga qabanto, mana ahan mid looga digayo kan lagu caburinayo siyaasiyiinta ka aragtida duwan Oday Farmaajo, umana muuqdo mid ciidamada looga waaninayo in ay ku milmaan siyaasadda, ee sida uu u muuqdo amniga iyo nabadda ay sheegayaan waa mid ay ugu ololaynayaan in laba sano oo muddo kororsi aan sharciga waafaqsanayn oo laga biya-diiday in la aqbalo, Ciddi diidana waxaa loo aqoonsanayaa kuwo amnidarro wada!.!
Dadka waaweyn ee maanta isku tagay iyo kuwo ka horeeyey oo hadlayba miyaysan ogeyn in gundhigga amnigu uu yahay siyaasadda oo heshiis laga noqdo iyo dastuurkii lagu heshiiyey oo la ilaaliyo, haddii ay taasi dhici-waydana in wax kasta la filan karo.
Previous articleMadaxweynaha dalka Kenya Uhuru, oo booqdey Congo markuu ka yimid Farmaajo
Next articleMadoobaysadu ma xaaraan baa?
Weerar Ka Dhacay Waqooyiga Dalka Mozambique Oo Dad Lagu Laayay